Man United oo ku dhawaaqday xiddiga ka tirsan Kooxda Juventus ee ay doonayso inay qeyb looga dhigo heshiiska Paul Pogba – Gool FM
(Manchester) 31 Maajo 2020. Manchester United ayaa lagu soo warramayaa inay xiiseynayso inay la soo saxiixato Adrien Rabiot xagaagan, taasoo qeyb ka ah suurtogalnimada ay Juventus kula soo wareegeyso Paul Pogba.
Wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan mustaqbalka Pogba ayaa weli sii socda, iyadoo xiddiga reer France uu umuuqdo inuu go’aansaday inuu ku qasbo inuu ka tago kooxda 20-ka jeer ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska.
Rabiot ayaa dhanka kale si xoogan loola xiriirinaayey bixitaankiisa bilihii dhawaa, United ayaa ka mid ah kooxaha loo maleynayo inay xiiseynayaan saxiixa xiddigii hore khadka dhexe ee Paris Saint-Germain.
Sida laga soo xigtay Calciomercato, kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa u sheegtay Old Lady inay diyaar u yihiin inay la soo wareegaan Rabiot oo qeyb ka ah isku bedelka Pogba, inkastoo caqabado dhowr ah ay tahay in laga gudbo.
Warbixinta ayaa sheegaysa in kala duwanaanshaha Juve ee 27-ka milyan gini ee 25-sano jirka uu yahay mid aad u sarreeya indhaha United, halka kooxda reer Ingiriiska sidoo kale aysan diyaar u aheyn inay la kulanto mushaharkiisa sanadkii 6.3 milyan oo gini.
Rabiot ayaa 24 kulan u saftay kooxda Maurizio Sarri xilli ciyaareedkan, laakiin waxa uu kaliya ku soo bilaawday 11 kulan oo horyaalka Serie A ah.